တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း၊ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ထွန်းထွန်း၊ ဂျင်းနီ တို့..Anyeint and Music concerts – USA 2011 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း၊ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ထွန်းထွန်း၊ ဂျင်းနီ တို့..Anyeint and Music concerts – USA 2011
တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း၊ကျော်ကျော်ဗိုလ်၊ထွန်းထွန်း၊ ဂျင်းနီ တို့..Anyeint and Music concerts – USA 2011
Posted by kai on Jul 28, 2011 in Events/Fundraise | 12 comments
Anyeint and Music concerts
နောက်နှစ်အတွက်.. ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်.. ဘယ်သူတွေသင့်လျှော်တယ်ဆိုတာပါ ဆွေးနွေးရေးပေးကြပါစေလိုကြောင်း…။
The Network of Myanmar American Association (NetMAA) is proud to sponsor and bring one of the most popular Anyeint troupe from Myanmar known as Anyeint to the U.S.
All proceeds of this U.S. Anyeint and Music concerts will go to the organization’s community outreach programs. NetMAA,anonprofit organization, is dedicated to maintain and promote Myanmar arts, culture, films and music. Throughout the year, to benefit the Myanmar American community, NetMAA holds various outreach programs such as arts and culture events includingafilm festival, photo exhibitions, benefit music concerts, and U.S. immigration services. Thank you for all your supports.
We apologize in advance for not having all Hninsi Yin Khwin Anyeint group’s original performers here in the U.S. Instead, the singers/dancer/actors that will be performing are Tin Maung San Min Win, Kyaw Kyaw Bo, Tun Tun (examplez), and Jenny, withaspecial guest, Ni Ni Win Shwe. Academy Nay Toe could not accompany with the group due to his extremely busy work schedule and personal reasons in Myanmar at this time. We regret any inconvenience that may cause to Nay Toe’s fans.
The Anyeint and Music concerts are scheduled as follow: the first hour will have singing section and the last two andahalf hours will be the Anyeint show. Just to let everyone know that these performers have limited time with us in the U.S. so they can only presentafew shows throughout the U.S. Below isalist of their performances and contact information. We hope that everyone will support these talented performers and help NetMAA in accommodating many more events within our Myanmar American community.
Las Vegas – Friday, July 29,2011
Sierro Gold Pub
5615 S. Jones Blvd.
Show Time: 7:00PM – 11:00PM
Ticket Information: (702) 340-2302
Tickets: $30, ($15 for minors: age 12 and under)
San Francisco – Saturday, August 6, 2011
Show Time: 6:00PM – 11:00PM
Ticket Information: (415) 867-4362
Tickets: $30, $40, and $50
New York – Saturday, August 13, 2011
222-05 56th Ave.,
Show Time: 6:00PM – 10:00PM
Tickets: $25, $35, $45 & VIP
Houston – Saturday, August 20, 2011
Show Time: 5:00PM – 9:00PM
Ticket Information: (832) 409-4985
Los Angeles – Saturday, August 27, 2011
Tickets: $25, $35, and VIP
The Network of Myanmar (Burmese) American Association
Member of California Lawyers For The Arts
“Dedicated to maintain and promote Myanmar arts, culture, films and music”
တနင်္လာနေ့ညပိုင်းက LAX အယ်လ်အေလေဆိပ်ကို မင်းသားသုံးလက်နဲ့ မင်းသမီးတလက်ေ၇ာက်တယ်.။ေ၇ာက်ရောက်ချင်းပဲ.. လူဝင်မှုကြိးကြပ်ရေးကွန်ပြူတာစံနစ် ပြသနာရှိလို့ဆိုပြီး.. လေဆိပ်အထွက် ရပ်ထားတာမို့ .. အားလုံး မနက် ၁နာရီမှ လေဆိပ်ကထွက်လို့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်..။
ထွန်းထွန်းက.. အငြိမ့်မှာ လူပျက်မလုပ်ဖူးလို့ သတင်းထွက်နေတာမို့ ဆိုင်ရာစီစဉ်သူကိုမေးကြည့်တော့ မဟုတ်ဖူးလို့ပြောသတဲ့..။
နေတိုးက… ကိုယ်ဝန်နဲ့အိဒ္ဒြာကျော်ဇင် နဲ့ကားရိုက်ချိန်းထားတာရှိတာမို့ ..( ဗိုက်ကြီးပိုမထွက်လာခင် အသည်းအသန်လုပ်ရသမို့ ).. အချိန်မရွေ့ နိုင်ဖြစ်ပြိး.. မလိုက်လာဖြစ်ပါတဲ့လေ..။
သူ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာ ဗီဇာရှိနေပြီးမို့.. စိတ်ရှိရင်ကောက်လာလို့ ရသေးတယ်လို့တော့.. ကြားပါတယ်..။
နှင်းဆီအငြိမ့်က ဒီမှာပိတ်သွားပြီဆိုတော့ အဲဘက်က ထွက်တဲ့အခွေတွေရှိရင်တော့ကောင်းမယ်နော်… သဘောကျတာကတော့ လွင်မိုးတို့အငြိမ့်လောက် ကျန်တဲ့သူတွေ လူရွှင်တော်လုပ်တာ သိပ်မရယ်ရဘူး။ မင်းမော်ကွန်းတို့လုပ်ကျတော့ သိပ်တော့မဆိုးဘူး။
သဂျီးရေ… လန့်လိုက်တာ… နေတိုးက ကိုယ်ဝန်နဲ့ဟုတ်လား… ။ ထွန်းထွန်းလည်း နှင်းဆီအငြိမ့်ထဲမှာပါသလို ရဲလေးလဲပါတယ်လေ။ မဆိုးပါဘူး စာရွက်ကိုင်ဖတ်ပြီး ပျက်တာတစ်ခုတော့ နည်းနည်းဆိုးတယ်(ဟီး)
အားပေးပါတယ် သူကြီး ရေ။ ကြော်ငြာထဲမှာ မင်းသားတွေအများကြီး လူပျက်လုပ်တဲ့ အထဲမှာတော့ ထွန်းထွန်းကို သဘောအကျဆုံးပဲ။
ဒီနေ့ပဲ အက်ဖန် မှာ အင်ဒါဗျူးတာ ကြားလိုက်တယ်.. ဘယ်တုန်းက ဗျူးထားလဲ မသိဘူး.. တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း ယူအက်စ်မှာ သွားက မဲ့ အကြောင်း ပြောနေတာ.. မရောက်တာ ၉နှစ်လောက် ရှိပြီ ဆိုတာလည်း ပါတယ်။
သူရဲလေးကောင်လို ပြဇာတ်မျိုး ဆိုရင်တော့ ကြည့်ချင်သေးတယ်..။ အကြောင်းအရာအသစ်ပေါ့
NPO ကလုပ်တာမို့..ရတဲ့ အမြတ်ငွေကို ပြန်လှူရမှာပါပဲ..။
လှူဖို့နေရာ ရည်ရွယ်ပြီးသားပေမဲ့.. .ရွာထဲက.. 2000GROUP ကိုပါ.. တတ်နိုင်သလောက် လှူဖို့တိုက်တွန်းကြည့်ဦးမယ်..။
နယူးယောက်မှာလုပ်တဲ့ အဖွဲ့ ကလည်း.. နန်းပရော့ဖစ်ပဲ..။
သိသလောက်တော့.. သူတို့ရတဲ့အမြတ်ငွေလည်း ..မြန်မာပြည်ထဲပို့နေတာပဲ…။
ကျနော်သိတာ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ပြေတီဦးတို့က သမီးဦးလေး မွေးပြီးသွားပြီဆိုလားလို့..။ ဖြီးချင်လည်း ယုတ္တိရှိရှိ ဖြီးသဂျီးရေ…. မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာေ ဆာင်းပါ;လိုတော့ မလုပ်နဲ့….။ :mad:
ကိုကြောင် သူတို.မင်္ဂလာဆောင်တာ တစ်နှစ်မပြည်.သေးဘူးနော် ဟုတ်လို.လားဗျ
အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့ ပြေတီဦးတို့က သမီးဦးလေး ဆိုတာ Ultar sound result ပါ ။
Anyeintဆိုလို့စဉ်းစားနေတာ အငြိမ့်ကို ပြောတာပဲ။ဂျင်းနီကတော့ အကတော်ပါတယ်။ဆိုကရေးတီးမှာလည်း ရွှေတံဆိပ်တွေရထားတာ။
`( ဗိုက်ကြီးပိုမထွက်လာခင် အသည်းအသန်လုပ်ရသမို့ ).. ´
ဘာတွေ အသည်းအသန် လုပ်ရတာတုန်း သူကြီး ရဲ့ 